ज्यान जोगाएर नेपाल फर्किएका प्रेमले अब रवि लामिछानेलाई हिसाब बुझाउन पर्ने ? - Nayabulanda.com
ज्यान जोगाएर नेपाल फर्किएका प्रेमले अब रवि लामिछानेलाई हिसाब बुझाउन पर्ने ?
३० श्रावण २०७५, बुधबार २०:४१ 153 पटक हेरिएको
काठमाडौं : विदेशमा रहँदा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरुलाई आर्थिक सहयोग संकलन गर्ने अभियान चलिरहेकै हुन्छ । अभियानको क्रममा उठेको रकम सदुपयोग भन्दा पनि दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै गुनासो बढ्ने गरेको छ । प्रेमबहादुर राई साउदीको जेलमा रहँदा नेपालमा भने ‘प्रेम बचाउ अभियान’ चलेको थियो । अभियानमा संकलन भएको रकम बुझाएर प्रेम नेपाल फर्किएका छन् । तर उनी नेपाल फर्किए पनि उनको नाममा उठेको रकम दुरुपयोग भएको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
अभियानको क्रममा उनी जेलमा रहेको देश साउदीबाट मात्रै ८ लाख ९२ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो । त्यस्तै संसारभरबाट भने ९२ लाखभन्दा बढी रकम उठेको अभियानलेनै जानकारी दिएको छ । दाताहरुले भने अभियानले आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । अभियानले पत्रकार सम्मेलन गरी २३ लाख ४१ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएको थियो ।
अस्वभाविक रुपमा देखाइएको खर्च विवरण प्रति दाताहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनिहरुले पारदर्शी रुपमा हिसाब सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन् । नेपालबाट सञ्चालन हुने टेलिभिजन कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनतासँग’ ले पनि यसबारेमा चासो राखेपछि थप चर्चामा आएको छ । साउदीमा दुई बर्ष ६ महिनासम्म जेल जीवन बिताएर आएका प्रेमबहादुर राईको दम्पत्तिको सहयोग बापत उठाइएको रकम दुरुपयोग भएको आशंका गरेका छन् ।